Abahlinzeki bokubhuka ngqo bazoba 'nefasitela lamathuba' ekuhambeni kwe-post-COVID-19
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ezokuvakasha » Abahlinzeki bokubhuka ngqo bazoba 'nefasitela lamathuba' ekuhambeni kwe-post-COVID-19
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
Ama-ejenti wezokuvakasha akwi-inthanethi (ama-OTA) kwakuyiyona ndlela yokuqala yokukhetha isiteshi sokubhuka sabangu-44% sabaphenduli bomhlaba wonke ku-Q3 2019, ngokusho kochwepheshe be-data and analytics. Kodwa-ke, izinqubomgomo zokubuyiselwa kwemali eziphikisanayo, ezihambisana nokushoda kwamakhasimende asebenza kahle, zinikeza abahlinzeka ngemisebenzi abaholayo ithuba lokukhuphula ukubhuka okuqondile ohambweni lwangemva kobhubhane.
Ama-OTA alawula isikhala semakethe yezokuvakasha eku-inthanethi, kepha ukungabi bikho kwezinqubomgomo zokubuyiselwa kwemali ezisebenza kahle kube ngenye yezindawo ezikhathazayo kakhulu ngesikhathi Covid-19. Inqubo yokubuyisa imali kumakhasimende esizeni esivela eceleni seyinkimbinkimbi kakhulu kunangesikhathi ubhukhe amahhotela nezindiza zezindiza 'isandla esiphakeme' sokuhlinzeka amakhasimende ngalolu bhubhane.
Kunesifiso esinamandla semikhiqizo / izinsizakalo ezihambisana nezithiyo zesikhathi nemali njengoba ama-82% wabahambi 'ehlala', 'imvamisa' futhi 'ethize' ethonywe yilezi zinto. Uma kukhulunywa ngenkonzo eyenziwe yaba ngeyakho, ** ama-80% 'ahlala', 'imvamisa' futhi 'athonywe' ngandlela thile. Ama-OTA kungenzeka angadlulwa nganoma yisiphi isikhathi maduzane, kepha-ke, abahlinzeki bezinsizakalo abahamba phambili abanokuxhumana okuqinile kwezenhlalo, futhi okulula ukusebenzisa ipulatifomu nohlelo lokusebenza lokuhamba, bazokwazi ukwenza ngokunenzuzo iminikelo futhi basebenzise isihambi sanamuhla, ngaleyo ndlela babavumele ukuthi baxhaphaze leli 'windi lamathuba'.
Ngaphambi kwe-COVID-19, * ama-44% abahambi bomhlaba abhukhe nge-OTA. Ukubhukha okuncane ngokuthe ngqo ngokubhukha okuvamile okungama-36% nomhlinzeki wendawo yokulala kanye nama-32% ngqo nenkampani yezindiza. Kodwa-ke, i-COVID-19 kungenzeka ishintshe isimo sengqondo. Lapho ukubhuka kuqondile, amakhasimende maningi amathuba okuthi ahlangane nensizakalo yamakhasimende engcono, ukuguquguquka okuthe xaxa kanye nezinketho zokubuyiselwa kwemali eceleni kwezintengo ezinhle.
Ngokuvamile izivakashi zibhuka nge-OTA ukuthola isivumelwano esisebenza kahle kakhulu njengoba amapulatifomu aku-inthanethi anikela ngezindlela ezahlukahlukene ongakhetha kuzo lapho ukhetha indawo yokuhlala, izindiza kanye nokuhlangenwe nakho okujwayelekile ngendawo oya kuyo. Kodwa-ke, i-COVID-19 ikhulise uchungechunge lwezinkinga ngaphakathi kwesakhiwo se-OTA njengezimpi zamakhasimende ezibuyiselwa imali namazinga angabazekayo wombukiso wamakhasimende. Lokhu kudale umonakalo omkhulu womkhiqizo kuma-OTA, okuthinte ubudlelwane nabathengi nabaphakeli.
Abahlinzeki bezinsizakalo abavame ukusebenza nama-OTA kufanele babambe leli thuba futhi bakhuthaze izivakashi ukuthi zibhukhe ngqo. Ukwakha uhlelo lokusebenza lokuvakasha kuzonikeza abahlinzeki bokubhuka ngqo ithuba lokukhuphula amazinga wokwenza ngezifiso zombili ukuhlaziya idatha ngempumelelo futhi kuvule indlela yezincomo ezihambelana kakhulu. Lokhu kungaholela emazingeni amakhulu okwaneliseka kwamakhasimende; umnikelo oholela kahle ngenxa yokwehla okukhulu kwesidingo sokuhamba silethwe yi-COVID-19.
* Ucwaningo lwabathengi be-Q3 2019 Global - abaphendulile abangama-29,744
** Ucwaningo lwakamuva lwe-COVID-19 lwabathengi (4 - 8th Nov 2020) - abaphenduli abangu-5,820
IBahamas Yakha Kumathuba Jikelele Wezindiza e ...